बदलिन नसकेको नेपाली समाज | चितवन पोष्ट दैनिक
बदलिन नसकेको नेपाली समाज
संसारका मानवसमाज परिवर्तित हुँदै गए । विश्वमानव आज विज्ञान र प्रविधिका हिसाबले तथा उत्पादनका हिसाबले निकै अघि बढे । बडेबडे चुनौतीसँग सजिलै सामना गर्न सक्ने भए । कुनै न कुनै कामको खोजीमा तल्लीन रहे, जसका कारण मानवहितमा हुने खालका आविष्कारहरु समेत हुँदै गए । तर, नेपाली समाजलाई गहिराइमा गएर अध्ययन गर्ने हो भने यो समाज खासै परिवर्तन भएको छैन । हिजो साइकल, मोटरसाइकल र अनेक नामका गाडीहरु थिएनन् तर अहिले छन्, यसैलाई समाज परिवर्तन भन्न मिल्ने हो भने बेग्लै कुरा ! तर, यदि मानसिक फराकिलोपनलाई विशुद्ध समाज परिवर्तन भनिने हो भने समाज परिवर्तन भएको छैन, जहाँको त्यहीँ छ । पहिले स्कुल, कलेजहरु थिएनन् । अक्षर पढ्ने अवसर थिएन । लेख्ने मौका थिएन । आज देशभरि कुनाकाप्चासम्म स्कुल, कलेज छन् । पढ्ने र पढाउने व्यवस्था राम्रै छ । देशमा पढेलेखेका मान्छेहरुको संख्या पनि बढेकै छ । फेरि पनि पढेलेखेका मान्छेको संख्या बढ्दैमा समाज परिवर्तन भएको भन्ने हो भने फरक कुरा, होइन भने आज पनि एक नेपाली नागरिक साँघुरो विचारको घेराभित्र थुनिएकै छ ।
शिक्षित होस्, अशिक्षित होस् वा अर्धशिक्षित भन्न मिल्ने खालका मानिस किन नहून्, कुसंस्कारको जालोभित्र लपेटिएकै छन् । नेपाली समाजमा कानुनी हिसाबले बन्देज लगाइएको भए पनि भित्रभित्र जातभातका कुराले मान्यता पाएकै छन् । धनका हिसाबले आफू धनी बन्न अरुलाई गरिब बनाउने खेलमा सक्रिय भएकै छन् । विश्वमानवले बुझ्दै गएको छ कि आर्थिक भ्रष्टाचारले देशलाई कुँजो बनाउँछ र दुनियाँको अगाडि नतमस्तक भएर बाँच्नुपर्छ ।
अब जहाँसम्म सवाल नेपाली नागरिक समाजको छ, समाजका गनिएका मानिएका र पढेलेखेका मानिसहरु नै आर्थिक भ्रष्टाचारमा चुर्लुंम्म डुबेका छन् । आज देशभरिका जेलहरुमा आर्थिक भ्रष्टाचार काण्डमा जति पनि थुनिएका छन् ती अपवादलाई छाडेर सबै पढेलेखेका र गनिए मानिएका मानिस नै छन् । फेरि यो समाजका मानिसहरु कतिसम्म नक्कली काम गर्न अभ्यस्त छन् भने कमजोर र कम बुझेका आफन्त वा दाजुभाइका जग्गा, सम्पत्ति छलछाम विद्याद्वारा कब्जा गर्छन्, समाजका टाठाबाठाहरुले औँलो नउठाऊन् भन्ने उद्देश्यले तिनै टाठाबाठाहरुको नेतृत्वमा सञ्चालित स्कुल र मन्दिरलाई चर्चा लायक रकम चन्दा दिन्छन् । एकातिर समाजसेवी भनाउन पाइने र अर्कोतिर कमजोरको धन सजिलै पचाउन पनि पाइने । यो खालको खेल समाजका कुनाकाप्चामा आज पनि निर्धक्क खेलिएको छ । कमजोर लुटिएको लुटियै छ, नक्कली समाजसेवीहरु छातीमा नाङ्लाजत्रा ब्याच झुन्ड्याएर भाषण ठोकिरहेका पनि छन् । यो क्रमले निकै लामो समयदेखि निरन्तरता पाएको छ ।
दुनियाँ अनेकौँ सिर्जनशील काममा व्यस्त छ, तर नेपालमा आज पनि काम गरेर खाँदा इज्जत जान्छ भन्ने मान्छेहरुको संख्या हजारमा होइन, लाखमा छ । एक परिवारको मुलीले महिनादिनसम्म हाडछाला घोटेर कमाइ गर्छ । त्यो कमाइमा रजाइँ गर्नेहरु बाँकी सबै परिवारका सदस्य हुन्छन् । काम गर्न पर्छ भन्ने चेत कसैको दिमागमा छैन । अपवादलाई छाडेर आज पनि समाजका बहुसंख्यक महिलाहरु साँझ–बिहान जसोतसो ढिँडो–भात पकाउने गर्छन्, बाँकी समय पूरै खेर फाल्छन् । अरु महिलाको नकारात्मक टिप्पणी गरेर वा आफ्नो फुर्तीफार्तीका कुरा गरेर जुनी काटिरहेका छन् । केही समयअघिसम्म भारतीय टेलिसिरियल हेरेर जुनी काट्थे, हिजोआज मोबाइलमा फेसबुक र युट्युबमा मुन्टो जोतेको जोत्यै दिन काट्छन् । यस्तो खालको नकारात्मक सामाजिक परिवर्तन देखिएको छ ।
हिजोका दिनमा मुलुकभित्रका जनतालाई पुग्ने अन्न उत्पादन हुन्थ्यो । भोकमरी शब्द पढ्न, लेख्न त पाइन्थ्यो तर त्यो शब्दसँग डराउन पर्थेन, तर आज उस्तैपरे देशभित्र कुनै क्षेत्रका जनता भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ । देशभित्र अन्न उत्पादनका लागि सक्रियता बढाउनुपर्छ भन्ने चेत कसैमा खुलेन । अहिले विश्वमानवलाई नोबल कोरोना भाइरसले लखेटिरहेको छ । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र धनीमध्येको एक राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकासमेतले कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न सकेको छैन भने नेपाल त हरेक कोणबाट कमजोर छ नै, कम्तीमा यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा हरेक नेपालीबीच एकता हुन जरूरी थियो र त्यही एकताको बलमा कोरोनाबाट बचेर आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थापन कसरी ठीक राख्ने छलफल र बहस गर्नुपथ्र्यो, तर दुर्भाग्य ! आज पनि नेपाली–नेपालीबीच आत्मीय एकता नभएको मात्रै होइन, सानो शीर्षकलाई समेत पहाडजत्रो बनाएर मारपिटमा उत्रिने अभ्यास गरिएको छ । उदाहरण केही दिनअघिको रूकुम–जाजरकोट हत्याकाण्डलाई लिन सकिन्छ ।
दलित भन्ने गरिएका एक युवा नवराज र ठकुरी भन्ने गरिएकी एक युवतीको प्रेमसम्बन्ध अघि बढेको अवस्थालाई केटी बस्ने समाजकाले पचाएनन् । कुसंस्कारमा जकडिएका र यो जात र त्यो जात भन्ने समाजले नवराज र उनका साथीहरुलाई लखेटी लखेटी चिर्पट र मुक्काले हिर्काए । भो भो गल्ती भो नकुट भन्दै दुई हात जोडेर माफी मागे र पनि तिनलाई कुट्न छाडिएन । जन्मिँदा कसैले हातमा जात बोकेर आएको हुँदैन । जात त जन्मिएपछि कसैले भनिदिन्छ । जन्मँदा सबै एकनासले शूद्र हुन्छन्, अर्थात् फोहोरमै डुब्ने खालका हुन्छन् । पछि गरिने कामका आधारमा मान्छेको पहिचान बदलिन सक्छ । उमेर पाको भएपश्चात् कसैले आफूलाई मानवलगायतका प्राणीहितमा समर्पित गर्छ भने उसलाई त्यतिबेला ब्राह्मण भन्न मिल्ला । विचारमा शुद्धता ल्याएर समाजसुधारको मार्गमा हिँड्छ भने उसलाई उत्तम मानव भन्न मिल्ला । यसको विपरीत मानवमूल्य र मान्यताविरूद्ध समाजलाई प्रदूषित गर्ने काममा जोकोही लाग्छ भने आफ्नो थरको पछाडि कसैले कुनै उच्च ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएको बताएपछि ऊ शूद्र नै हो । तल्लो तहको निकृष्ट मानव हो । मान्छे उच्च शुद्ध कर्मले हुन्छ न कि कुनै यो वा त्यो जातले । यसलाई ठूलै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेपाली समाजको चित्त फराकिलो हुन नसक्दा, समाज परिवर्तन हुन नसक्दा फोकटमा एक प्रेमी नवराजलगायत अन्य पाँच जना होनाहार युवाहरुको रूकुममा ज्यान गयो ।
संसारमा हाताहाती मह¤व हुन्छ भने युवा उमेरका मान्छेको मह¤व हुने हो । युवा उमेरकाले नै संसार हाँकिरहेका हुन्छन् । उत्पादन र आविष्कार युवाहरुले नै गर्ने हो । युवाको मेहनत र बुद्धिले समाजलाई सन्तुलित राख्ने हो । वृद्धवृद्धालाई पहिले मानवसमाजलाई स्थापित गर्न सेवा गरेबापत पुरस्कारस्वरुप सम्मानसहित पालनपोषण गर्नुपर्छ । बच्चाको भविष्य हुन्छ, युवाको वर्तमान हुन्छ तर वृद्धको वर्तमान र भविष्य दुवै हुँदैन । यसरी जुन कोणबाट हेर्दा पनि युवाको मह¤व झल्किन्छ र पनि समाज परिवर्तन नहुनुको कारणबाट केही दिनअघि ६ जना नेपाली युवाहरुको अनाहकमा ज्यान गयो । यस्ता अमानवीय घटनाहरु नेपालमा यसपटकमात्रै भएको होइन, पहिले पनि भएका हुन् तर यस्तो जघन्य हत्या नै भएको चाहिँ पहिलो नै हुनुपर्छ । यसपटक हत्यामा संलग्नहरुलाई सम्मानित अदालतले पक्कै पनि कानुनबमोजिम सजाय दिन्छ नै, तर समाज परिवर्तन नभएसम्म यस्ता खालका घटनाहरु दोहोरिन्छन् भन्नेतर्फ सचेत भने हुनैपर्छ । जबसम्म नेपाली मान्छेहरुको विचारमा फराकिलोपन देखा पर्दैन तबसम्म समाज परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिन्न र जबसम्म समाज परिवर्तन हुँदैन तबसम्म न आर्थिक भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, न त यस्ता खालका भेदभाव र मारपिटको अन्त्य भएर मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ नै उन्मुख हुन्छ ।